Akhri: Dhalinyaro rasaas noonool isku weereeya Boosaaso & maamulka oo u hanjabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarrunta gobolka Bari ayaa sheegaya in magaaladaas ay kusoo korortay arrin halis ku ah amaanka, taasoo ah rasaas ay xilliga galbihii ay weydaarsadaan dhallinyaro koox koox u abaabulan oo degan magaalada.
Arrintaas la yaabka leh ee ku cusub magaalada Boosaaso ayaa qalqal gelisay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada, inkastoo aysan geysan jirin wax khasaare ah.
Gudoomiyaha gobolka Bari, C/samad Maxamed Kulan oo falkaan ka hadlay ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo rabshadaas, tilaabana laga qaado dadka ku lugta leh.
Gudoomiye Kulan ayaa ku hanjabay in dhalinyaradii lagu arko hub iyo rasaas la ridayo ay wijihi doonaan xabsi adag.
Sidoo kale, Kulan ayaa ugu hanjabay waalidiinta dhalay dhalinyaradaas in sharciga la horgeyn doono haddii ay ilmahooda ka celin waayaan falkaas.
“Falalkaas halista ku ah amaanka waan ka hortegeynaa, qofkii lagu helo hub iyo rasaas uu riday wuxuu wajihi doonaa xabsi dheer, sidoo kale waaldiinta dhalinyaradaas dhalay waxey wajihi doonaan shraciga haddii ay qaadan waayaan mas’uuliyadda waalidnimo ee ka saaran carruntooda” ayuu yiri C/samada Kulan.
Ugu dambeyntii, Gudoomiyaha gobolka Bari ayaa ku hanjabay in tilaabo laga qaadi doon ciddii lagu helo iney ku lug leedahay abaaulka dhalinyaradan isku rasaasseya gudaha magaalada Boosaaso.
Waxaa horay magaalooyinka Soomaaliya caan uga ahaa dhalinyarada xaafadaha ee koox kooxda u dagaalama iyagoo adeegsanaya dhagxaan iyo waraf (Weero), waxaase hadda soo kordhay in weeradii loo badelay rasaas noo nool.